Setroka fotony: inona izany, toetra sy vokany | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 13/07/2021 10:50 | Tontolo_iainana
Ny fivoarana ara-toekarena sy indostrialy any amin'ny tanàna lehibe dia miteraka olana goavana amin'ny fandotoana ny rivotra. Ny iray amin'ireo voka-dratsy ateraky ny fisondrotan'ny gazy entona ao an-tanàna dia ny setroka fotony. Izy io dia momba ny fahalotoan'ny atmosfera izay misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamantsika noho ny fanangonana entona manimba ao amin'ny habakabaka ao an-tanàna.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny setroka fotokimika, ny toetrany, ny fiantraikany amin'ny fahasalamana sy ny fomba hampihenana azy.
1 Inona ny setroky ny fotony ary ahoana ny famokarana azy?
2 Vokany ratsy eo amin'ny tontolo iainana
3 Voka-dratsy ateraky ny setroka fotony
4 Ahena ny loto
Inona ny setroky ny fotony ary ahoana ny famokarana azy?
Ny setroka dia vokatry ny fahalotoan'ny rivotra be indrindra, indrindra ny setroka avy amin'ny arina mandrehitra, na dia vokatry ny famoahana entona avy amin'ny indostria na ozinina sy fiara aza. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, setroka dia karazana rahona ateraky ny fahalotoan'ny tontolo iainana, satria toy ny rahona maloto izy io. Ny teny anglisy dia te hanao vazivazy hanome anaram-bosotra an'ity zavona ity. Setroka (setroka) sy zavona (zavona) no ahafantarana azy.
Ny fandotoana lehibe izay mamokatra setroka dia oksida azota (NOx), ozone (O3), asidra azota (HNO3), peroroida nitroacetyl (PAN), hidrozida peroxyde (H2O2). Votoatin'ny organika voahosotra amin'ny ampahany izy ireo ary ny sasany tsy may, fa ny hydrocarbons maivana navoakan'ny fiara dia araka ny efa nolazaiko tetsy aloha.
Zava-dehibe iray hafa koa ny tara-masoandro, satria mamokatra radika maimaim-poana, izay manomboka ny fizotran'ny simika mandrafitra ity rahona ity. Indraindray dia volomboasary noho ny NO2, fa ara-dalàna ny volondavenona. Iray amin'ireo ohatra miavaka indrindra ny lanitra any Sina na Japon.
Ny fanangonan-karena ny etona voalaza etsy ambony no nahatonga ny famoronana "rahona" toy ny setroka. Rehefa ampiarahina amin'ny tsindry avo dia miakatra ny zavona fa tsy mitete rano. Amin'ny tranga sasany, poizina manapoizina ny atmosfera. Io ilay antsoina hoe setroka fotony. Izy io koa dia mety ho endrika orana asidra sy zavona.
Vokany ratsy eo amin'ny tontolo iainana
Ankoatry ny fiatraikany ratsy eo amin'ny tontolo dia betsaka ihany koa ny fiatraikany ratsy amin'ny tontolo iainana. Ohatra, manova ny firafitry ny tsindrin-tsakafo mihitsy izy io, satria misy fiatraikany mivantana na an-kolaka ny fandotoana ny tontolo iainana. Mampihena be ny fahitana ihany koa izany. Rehefa any an-tanàna isika misy setroka be fotony ny fahitana dia azo ahena ho folo metatra vitsivitsy monja. Ny fihenan'ny fahitana dia tsy vitan'ny marindrano, fa mitsangana ihany koa, ary ny lanitra tsy ho tazana.
Rehefa misy be loatra io fisehoan-javatra io dia tsy miteraka rahona na lanitra madio. Tsy misy alina feno kintana ihany koa. Voaly manopy mavo fotsiny, volomboasary volomboasary no hitanao eto aminay. Ataovy ao an-tsaina fa iray amin'ireo fiatraikany ratsy amin'ny tontolo iainana dia ny fiovan'ny toetr'andro tahaka ny fanovana ny fitondrana orana sy ny hafanana mitombo. Io fiakaran'ny maripana io dia avy amin'ny fiakaran'ny taratra masoandro avy any ambonin'ny etona-gazy ary miverina amin'ny tany. Miasa toy ny gazy entona mamoaka taratra ultraviolet izy io.
Etsy ankilany, miova ny fantsona satria ny loto sy ny potika amin'ny fampiatoana karbonika dia miteraka fihenan'ny haavon'ny orana.
Voka-dratsy ateraky ny setroka fotony
Araka ny efa nampoizina, io fisehoan-javatra mandoto io koa dia misy vokany ratsy eo amin'ny fahasalaman'ny olona. Andao hojerentsika hoe inona ireo vokany:
Matetika ny olona mipetraka amin'ny tanàna maloto dia sosotra amin'ny masony sy ny taovam-pisefoana ataon'izy ireo.
Ny ankizy sy ny be antitra no mora tohina indrindra ankoatry ny olona manana olana amin'ny havokavoka.
Izy io dia mety hiteraka emfisema, sohika na bronchitis ary aretim-po.
Ny olona voan'ny areti-mandringana dia mety hiharatsy satria feno tontolo iainana ny tontolo iainana, tsara amin'ny andro orana hametrahana loto.
Izy io dia mety hiteraka fofohana fohy, tenda, kohaka ary fihenan'ny havokavoka.
Mahatonga tsy fahampian-dra noho ny fatran'ny gazy karbonika avo lenta izay manakana ny fifanakalozana oksizenina ao amin'ny ra sy ao amin'ny havokavoka.
Farany, mety hitarika ho amin'ny fahafatesana aloha loatra.
Anisan'ireo tanàna lehibe manerantany miaraka amin'ny fandotoana betsaka indrindra eto amintsika Londres izay nijaly mafy tamin'ny lasa noho ny setroka setroka. Ny faritra sasany dia nanatsara ny kalitaon'ny rivotra noho ny ôrdônansy isan-karazany ary niforona ny faritra tsy misy setroka. Misaotra an'izany fa nisy indostria sasany voarara tsy hiasa tahaka ny fiara voarara tsy hiditra amin'ny faritra afovoan-tanàna.
Los Angeles koa dia tanàna lehibe iray hafa misy fandotoana lehibe. Ny fahaketrahana voahodidin'ny tendrombohitra dia sarotra kokoa ny mandositra ny gazy. Amin'izao fotoana izao mbola tsy dia manao zavatra firy amin'ny fampidinana ny haavon'ny fandotoany.
Mba hampihenana ny fandotoana, ny governemanta sy ny orinasa lehibe dia tsy maintsy manaiky. Tokony hanohana ny olom-pirenena sy ny toetrantsika isika amin'izany. Ity tranga mandoto ity dia azo iadiana amin'ny voajanahary tanteraka noho ny orana sy ny rivotra manadio fiainana vaovao ary manameloka ny manodidina. Mila mampihena ny loto fotsiny ianao mba hadio ny rivotra iainana. Matetika dia betsaka kokoa ny fandotoana any amin'ny faritra izay misy rivotra kely ary kely ny orana. Izany rehetra izany dia adika amin'ny fandotoana avo lenta.
Ny governemanta sy ny orinasa lehibe dia afaka manapa-kevitra hampihena ny entona maloto satria ny ankamaroan'izy ireo dia novokarin'ny orinasa sy orinasa indostrialy. Ary farany, ny olom-pirenena dia tsy maintsy manao ny kely indrindra amin'ny fampiasana kely kokoa ny fiara, amin'ny fitateram-bahoaka na bisikileta ary hampihena ny fanjifana herinaratra. Misy fihetsika mora foana isan'andro toy izao mamorona habaka maintso kokoa, zaridaina mitsangana, na mandeha amin'ny toerana rehetra mampiasa fitateram-bahoaka maharitra izay afaka manampy antsika hampihena be ny fandotoana.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny setroka, ny toetrany ary ny vokadratsin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Setroka fotony